Douglas Karr na Edge nke Web Radio | Martech Zone
Gị na Erin Sparks nọrọ ezigbo oge Edge nke Weebụ redio (denye aha na iTunes) Satọdee gara aga. Anyị tụlere ụfọdụ infographics, facebook akwụpụtara nsonaazụ ọchụchọ, atụmatụ ọdịnaya na mgbasa ozi mmekọrịta. Erin na ndị otu ya na-ewepụta ihe nkiri a kwa izu ma na-ebi na Indianapolis. I nwekwara ike gee ntị na WXNT peeji ụlọ.
Ọ bụrụ n’inweghị ohere ige ntị na ngalaba - lee akụkụ nke mbụ. Lelee akụkụ ndị ọzọ na-abanye na Edge nke Web Youtube Channel.
Tags: n'ọnụ ọnụ weebụerin ebuaInfographics AhịaRadio